မူဆလင်များကိုဗုံးကြဲချင်သောထရမ်းထောက်ခံ သူကို အမေရိကန် ရဲဖမ်းဆီး | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»မူဆလင်များကိုဗုံးကြဲချင်သောထရမ်းထောက်ခံ သူကို အမေရိကန် ရဲဖမ်းဆီး	Leaveacomment
မူဆလင်များကိုဗုံးကြဲချင်သောထရမ်းထောက်ခံ သူကို အမေရိကန် ရဲဖမ်းဆီး	Posted by danyawadi on December 23, 2015 in သတင်းများ, Breaking News	အင်္ဂါ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၅
အမေရိကန်မူဆလင်များကို တိုက်ခိုက်ရန်အစီအစဉ်ဆွဲနေသော ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် ထောက်ခံ သူတစ်ဦးကို အမေရိကန်၊ ကာလီဖိုးနီးယား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးက လိုက်ရှာနေသည်။
ဝီလီယံ ဆယ်လီ ဆိုသူမှ မူဆလင်များကို ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများနှင့် တိုက်ခိုက်ရန် လျှို့ ဝှက်ကြံ စဉ်နေသည်ဟူသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ လက်ခံရရှိပြီးနောက် ကာလီဖိုးနီးယားရဲက တနင်္ဂနွေ ညနေပိုင်းက ၎င်း၏အိမ်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။
ရဲများက သံသယရှိဖွယ် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိပြီး ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ အသက် ၅၅ နှစ် အရွယ် ရေပိုက်ဆက်/ပြင်သမား သည် ဝါရှင်တန်ဒီစီ ရှိ အမေရိကန်အစ္စလမ္မစ် ဆက်ဆံရေး (CAIR) ကို ခြိမ်းခြောက်စာ ပေးပို့ခဲ့သည်။
၎င်းကို ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မူဆလင်ပစ်မှတ်များအား ရာဇဝတ်မှုမြောက် ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြင့် တရားစွဲထားသည်။
မူဆလင်အသိုင်းအဝန်း ထောက်ခံသူများကမူ အကြမ်းဖက်မှုစွဲချက်များဖြင့် အမှုဖွင့်စေချင်ကြသည်။ လူများစွာ သေစေခဲ့သော ပါရီတိုက်ခိုက်မှုများအပြီး၊ အမေရိကန်ရီပါ့ပလေကန်သမ္မတပြိုင်ပွဲဝင် များဖြစ်ကြသော ဘင်ကာဆင် နှင့် ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့၏ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး မှတ်ချက်များအပြီး မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးခံစားမှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
၎င်း၏ဖေ့စဘုတ်တွင် မူဆလင်များအားလုံး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ရနိအဆိုပြုသော ရီပါ့ပလေကန် သမ္မတပြိုင်ပွဲဝင် ရှေ့ပြေးနေသူ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် အား ထောက်ခံကြောင်း ရေးသားထားသည်။
Investigators in the US state of California are seeking hate crime charges againstaDonald Trump supporter for planning to attack American Muslims.
“Donald trumps on again I’m happy leaders okay but this guysagreat point man (sic),” Celli wrote inagrammatically incorrect rambling on October 21. “I’ll follow this MAN to the end of the world.”
Trump has createdafuror in the US and around the world by proposinga“total and complete shutdown of Muslims” entering the United States, following last month’s mass shooting in California.
Trump’s fiery remarks on immigration, Muslims and other issues have dominated the 2016 election campaign, and during the fifth GOP debate on Tuesday night the billionaire businessman repeated his controversial remarks, drawing rebukes from several of his rivals.
← သမ္မတဟောင်းလုံခြုံရေးနဲ့ ပတ် သက်ပြီး NLD နောက်ကြောင်း လှန်မှာ မဟုတ်	အာဏာလွဲပြောင်းရေး အခမ်းအနား သမ္မတအိမ်တော်မှာ ကျင်းပပါမည် →